कस्तो छ, प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण तालिका ? « ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal
कस्तो छ, प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण तालिका ?
काठमाडौ, २२ चैत्र । दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट सुरु हु“दैछ । प्रधानमन्त्री ओली तीन दिने भारत भ्रमणका लािग चैत २३ गते बिहान ९ बजे त्रिभुवन विमानस्थलबाट भारत प्रस्थान गर्नेछन् ।
दिल्लीस्थित इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरे लगतै प्रधानमन्त्री ओली सीधै राष्ट्रपति भवन पुग्नेछन । राष्ट्रपति भवनमा केहीबेरको आरामपछि भारतीय उद्योगी व्यवसायीसंगको अन्तरक्रियामा सहभागी हुने कार्यक्रम रहेको छ । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपालमा लगानीबारे प्रधानमन्त्री ओलीले इन्डिया फाउन्डेसन तथा भारतीय उद्योग वाणिज्य महासंघ (फिक्की)द्वारा आयोजित बेग्लाबेग्लै कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रमपछि प्रधामन्त्री ओली दिवाभोजमा सहभागी हुने बताइएको छ ।
भारतीय राजनीतिक दलका नेताहरुले राष्ट्रपति भवनमै प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्ने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयल बताइएको छ । भेटमा भारतीय कांग्रेसका अध्यक्ष राहुल गान्धी, भारतीय जनता पार्टीका शीर्ष नेता, भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी माक्र्सवादीका महासचिव सीताराम यचुरी, पूर्वसांसद डीपी त्रिपाठी र अन्य साना दलका नेताले भेट्ने कार्यक्र तय गरिएको छ ।
सोही दिन सा“झ बाह्रखम्बारोडस्थित नेपाली दुतावासमा नेपाली समुदायसग भेटवार्ता गर्ने र नेपाली दुतावासले प्रधानमन्त्रीको सम्मानमा आयोजना गर्ने रात्रीभोजमा उनी सहभागी हुनेछन् । रात्रिभोजमा दिल्लीस्थित कूटनीतिक नियोग र राजनीति सम्बद्ध व्यक्तिहरु सहभागी हुने बताइएको छ । दुतावासले भारतका प्रधानमन्त्रीदेखि राजनीतिक दलका शीर्ष नेता, पूर्वमन्त्री, नेपालका लागि पूर्वराजदूतलगायतलाई पनि निमन्त्रणा गरेको बताएको छ ।
भ्रमणको दोस्रो दिन चैत २४ गते बिहानै राष्ट्रपति भवनमा समकक्षी नरेन्द्र मोदीले प्रधानमन्त्रीलाई स्वागत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । प्रधानमन्त्री ओली र समकक्षी मोदीबीच केहीबेर वार्ता हुने बताएको छ । दुई प्रधामन्त्रीको बार्तापछि भारतीय सेनाले उच्च सैनिक गार्ड आफ् अनर दिने कार्यक्रम तय भएको छ । गार्ड अफ अनर कार्यक्रमलगतै भारतका राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द तथा परराष्ट्रमन्त्री बैंकया नायडुसंग शिष्टाचार भेट हुने बताइएको छ । त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओली राजघाटस्थित महात्मा गान्धीको समाधिस्थल जाने कार्यक्रम छ ।
राजघाटमा महात्मा गान्धीको समाधिस्थलमा दीप प्रज्ज्वलन गरेपछि हैदरावाद हाउसमा प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीबीच वन टु वन वार्ता हुने बताइएको छ । वार्ता लगत्तै भ्रमण प्रतिनिधि मण्डलका सदस्यसहितको उपस्थितिमा संयुक्त छलफल हुनेछ । छलफलपछि दुई देशबीच हुने सम्झौतापत्र आदनप्रदानसम्बन्धी कार्यक्रम तय गरिएको छ ।
त्यस पछि संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेर सम्झौताबारे जानकारी दिनेछ । पत्रकार सम्मेलनमा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्नेछन् । पत्रकार सम्मेलनपछि प्रधानमन्त्री ओली हैदरावाद हाउसमै दिवाभोजमा सहभागी हुने कार्यक्रम रहेको छ । सा“झ विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज, गृहमन्त्री राजनाथ सिंह र वित्तमन्त्री अरुण जेट्लीले बेग्लाबेग्लै शिष्टाचार भेट गर्ने कार्यक्रम छ ।